Biyyoota Garee F jalatti ramadaman afran - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoota Garee F jalatti ramadaman afran
Goodayyaa suuraa Jarman Waancaa Addunyaa bara 2014 Arjantiinaa injifachuun fudhatte
Ramaddiin garee biyyoota Waancaa Addunyaa irratti hirmaatanii ba'eera. Garee F jelattis biyyoonni kunneen ramadamanii jiru.
Shaampiyoonaan waltajjii darbee Jarmaniin, si'a afur Waancaa Addunyaa injifatteetti. Yeroo ammaas garee cimaa addunyaa kanaati.
Goodayyaa suuraa Toonii Kiruuss taphoota 78 irratti hirmaachuun gooliiwwan 12 lakkoofsiseera.
Taphataa ijoo: Toonii Kruuss. Toomaas Mulariifi Meesut Oozilitti dabalee taphataan sarara gidduu kilaba Riyaal Madriid kun, garee kana keessatti taphataa muuxannoo qabuu fi garicha fuulduratti tarkaanfachiisu dha. Bara 2014tti Biyyi isaa Jarmaniin Waancaa Addunyaa akka injifattu deeggarsa taasiseen alattis kilaba isaa waliin si'a lama Chaampiyoons Liigii, si'a tokko laaligaa Ispeen, si'a lama ammoo Fiifaa Kilab Woorlid Kaapp injifateera.
Leenjisaan eenyu: Yohaakim Loo. Aangoo leenjisummaa kanatti dhufuu isaan dura Yargan Kiliinsimaaniif gargaaraa leenjisaa ta'uun bara 2004-2006tti tajaajilaniiru. Namni ganna 57 kun bara 2014 tti Jarman Arjentiinaa injifachuun Waancaa Addunyaa akka argaattu, bara darbes Waancaa Konfedereeshinii akka mootuu taasisaniiru.
Taphoota waancaa addunyaa 6 darban hundarratti Meeksikoon gareele 16 marsaa itti aanu galan keessa seentee turte. Bara 1986 ammoo tapha ofii qopheessite irratti nuusa xumuraaf geessee turte.
Taphataa Ijoo: Hirviing Lozaanoo erga Paachukaa gadi dhiisee gara PSV deemee booda taphoota sadii irratti galchiiwwan sadi galchuu danda'eera. Dargaggeessi ganna 22 kun taphataa cimaa garee biyyaalessaa biyyattii ta'aa jira.
Image copyright PEDRO PARDO
Goodayyaa suuraa Taphataan kun qalbii taphataa cimaa Arjantiinaa duraanii Diyeegoo Maaraadoonaa hawwachuu danda'eera.
Leenjisaan eenyu: Leenjisaan gargaaraa kilabii Maanchiistar Siitii duraanii Huwaan Kaarloos Osoriyoo Meeksiikoo leenjisaa jira. Haa ta'u malee arrabsoo fi jechoota hin malle fayyadame jedhamee FIFA'n taphoota 6 irraa waan adabameef tapha gulaallii kana irratti garee isaa waliin hin turre.
Swiidiniif Waancaan Addunyaa Raashiyaa bara 2018 hirmaannaa ishii isa 12ffaa ta'a. 2006 booda ammoo isa jalqabaati.
Taphataa ijoo: Zilaataan Ibraahiimooviichiin bakka buusuun waa salphaa miti. Haata'u malee taphataan sarara fuulduraa kilaba Al Aayin Maarkuuz Bergi taphootaa gulaallii kudhan taphataman irratti goolii saddeet galchuu danda'eera.
Taphataa Primiyeershiippi Iskootiland: Maaykil Lustiig(Seeltiik)
Leenjisaan eenyu: Gaheessi ganna 55 Jaanee Aandarsan itti gaafatamuummaa garee kanaa kan fudhate turtii waggoota shan IFK Noorkopiingi booda. Garee kana gaggeessuu kan eegale tapha gulaallii Waancaa Addunyaatiini.
4. Kooriyaa Kibbaa
Garee Eeshiyaa keessaa Waancaa Addunyaa keessatti garee maqaa Loltoota Taa'egehuuk jedhamuun beekamu caalaa raawwii hunda caalaa kan galmeesse hin jiru. Uzbeekistaani waliin goolii malee walqixa ba'uun Kooriyaa Kibbaa ramaddii 10 dhumaa keessatti akka ramadamtu mirkaneeffateetti. Dorgommiin Waancaa Addunyaa kun ammoo kan isheen walitti fufinsaan si'a sagaliif irratti hirmaattudha.
Goodayyaa suuraa Lii Doongi-guuk yeroo Waancaan Addunyaa Raashiyaatti jalqabu waggaa 39 guuta.
Taphataa adda-duree: Saan He'uungi-miin Tootinaam keessatti ammam akka qalbii rarraasu agarsiiseera. Garee kana keessattis tarree warra maqaan isaani ciminaan waamamu keessatti argama. Jalqaba bara 2016 irraa eegalee goolii sadarkaa addunyaatti tokko qofa lakkoofsise, kunis gareen isaa goolii yaaluu keessatti hanqina agrsiisuurraa kan ka'e ta'a.
Lii Doongi-guuk kan yeroo dhumaaf darbanitti booda jijjiirameefi yeroo Waancaan Addunyaa baranaa kana waggaa 39 kan guutu iji irra kaawwatameera. Taphataa fuula duraa Middilsbooroo duraanii kun yeroo waggoota 19 keessatti waancaawwan 105 argateera.
Eenyu leenjisaan: Shiin Taa'ee-yoongi maqaa masoo 'Moriinoo warra Eeshiyaa' jedhamuun beekamu garuu sababii yeroo waancaaf daban keessatti haleelanii-haleelamuu agarsiisaniin dhiibbaa jala jiru. Ta'us garuu, waxabajjii keessa waan itti gaafatamummaa kana fudhataniif, amma sirreessutti yeroon kennameeraaf.
Leenjisaan wagga 48 kun Kilabii Kooriyaa Kibbaa Liigii K jedhamu keessa waggoota 12 akka tureefi bara 2005nitti osoo soorama hin ba'iin liigii Awustiraaliyaa keessatti takkaa mullateera.